“Ninka goolka naga dhaliyay waxay aheyd in la ceyriyo” – Frank Lampard – Gool FM
Dajiye February 18, 2020
(London) 18 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa sheegay in kabtanka Manchester United ee Harry Maguire ay aheyd in ciyaarta laga ceyriyo kahor inta uusan goolka labaad u dhalinin kooxdiisa.
Manchester United ayaa guul dahabi ah garoonka Stamford Bridge kaga soo gaartay kooxda Chelsea, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Kaamirooyinka ayaa waxay qabteen lugta Harry Maguire oo ku dhaceysa weeraryahanka Chelsea ee Michy Batshuayi, qeybta hore ee ciyaarta, kahor inta uusan goolka labaad madax ugu dhalinin kooxdiisa daqiiqadii 66-aad ee qeybta labaad.
Frank Lampard ayaa ciyaarta kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in Harry Maguire uu u qalmay kaarka roosaha wuxuuna yiri:
“Harry Maguire wuxuu u qalmay in la ceyriyo, taasi waxay aheyd wax iska cad, xaqiiqdii waxayna badali laheyd hanaanka ciyaarta”.
“Go’aannada noocan oo kale ah waa muhiim, tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah doorka ay tahay in muuqaal caawiyaha uu ka ciyaaro, taasoo ah in la raaco toogashada marka dhinacyo kala duwan laga eego, ma garanayo sababta aysan garsoorayaashu u fiirinaynin shaashadda, waa in la adeegsadaa”.
Intaas kaddib Frank Lampard ayaa wuxuu ka hadlay goolashii laga diiday oo ay kala dhaliyeen Kurt Zouma iyo Olivier Giroud wuxuuna yiri:
“Goolkii Zouma wuxuu u qalmay in naloo xisaabiyo… goolkii Olivier Giroud wuxuu saameyn ku yeeshay niyadeena, laakiin tani waxay ahayd natiijo dhowr go’aamo leh”.